B-mpịakọta, eserese ngwaahịa, eserese akụkọ, egwu, vidio vidio, ntụgharị, eserese, eserese 3D, vidiyo 3D, vidiyo ndebiri vidiyo, nsonaazụ ụda, nsonaazụ vidiyo, yana ọbụna ndebiri vidiyo zuru ezu maka vidiyo gị ọzọ enwere ike zụta n'ịntanetị. Dị ka ị na-achọ ka streamline gị video mmepe, ndị a nchịkọta nwere ike n'ezie mee ngwangwa gị video mmepụta na-eme ka gị videos anya nnọọ ọkachamara na akụkụ dị nta nke oge. Y’oburu n’inwe ihe omuma nke oma, inwere ike igho icho
Nkwukọrịta ndị ahịa bụ mkpà nke azụmahịa ọ bụla. Otú ọ dị, na COVID-19 na-amanye mmefu ego maka 65% nke ndị na-ere ahịa, a na-ekenye ndị otu ọrụ imekwu obere. Nke a pụtara ịnwe ike iwepụta azụmaahịa na azụmaahịa niile na mmefu ego belata, na oge na-enweghị okomoko nke onye mmebe ma ọ bụ ụlọ ọrụ iji mepụta ya. Workingrụ ọrụ na ire ere na-apụtakwa na ndị otu azụmaahịa na ndị ahịa agaghịzi atụkwasị obi na nkwukọrịta okwu mmadụ iji zụlite
Maka afọ ole na ole gara aga, anọ m na-eji nnukwu ngwa ọrụ ndị ọzọ iji mado faịlụ PDF m iji rụọ ọrụ n'ịntanetị. Ọsọ bụ ihe dị n'ịntanetị oge niile, yabụ na m na-eziga faịlụ PDF ma ọ bụ na-akwado ya, Achọrọ m ijide n'aka na agbakọtara. Gini kpatara mpikota a PDF? Mkpakọ nwere ike were faịlụ nke ọtụtụ megabytes wee weda ya narị narị kilobytes ole na ole, na-eme ka ọ dị mfe iri ari site na injin ọchụchọ, na-eme ya ngwa ngwa
WordPress: Etu bulite na Embed PDF
Mọnde, Jenụwarị 7, 2019 Mọnde, Jenụwarị 7, 2019 Douglas Karr
Omume nke na-aga n'ihu na-eto eto yana ndị ahịa m na-etinye ihe onwunwe na saịtị ha na-enweghị ịmanye atụmanya ịdebanye aha iji budata ha. PDFs kpọmkwem - tinyere akwụkwọ ọcha, ọmụmụ ihe, iji okwu, ntuziaka, wdg. Ebe ochie ha nwere bọtịnụ nbudata nke ndị ọbịa nwere ike pịa nke ga-ebudata ma mepee PDF ahụ ozugbo. N'ezie, ha nwere ike